HP က LASERJET 1018 ပရင်တာများအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
အဆိုပါ HP က LaserJet 1018 ပရင်တာများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို download လုပ်ပါ
အဆိုပါ HP က LaserJet 1018 ကွန်ပျူတာနှင့်အတူသင့်လျော်အပြန်အလှန်များအတွက်လိုအပ်သော software ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပိုင်ရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုမီ။ အောက်တွင်ကျနော်တို့လိုအပ်တဲ့ drivers တွေကိုရှာပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်းလေးအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖော်ပြရန်။ သငျသညျကိုသာအများဆုံးအဆင်ပြေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအ action ကိုထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ HP က LaserJet 1018 ပရင်တာများအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
အားလုံး Modes သာအတွက် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုမိအသုံးပြုသူသာဖိုင်တွေရှာဖွေနှင့်သင့် device ကိုမှသူတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားဖို့လိုသည်။ တစ်ဦးချင်းစီနည်းလမ်းအတွက်အလွန်ရှာဖွေရေး algorithm ကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားကြောင်း, ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်သင့်လျော်သည်။ ရဲ့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
Method ကို 1: HP ကပံ့ပိုးမှု 's Page
HP က - ကိုယ်ပိုင်အရာရှိတဦးက website နှင့်ထောက်ခံမှုစာမျက်နှာများသည့်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီး။ အဲဒါကိုတွင်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသမျှပိုင်ရှင်ဟာသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုရှာတှေ့နိုငျမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းလိုအပ်သောဖိုင်တွေနဲ့ software ကို download လုပ်ပါရန်။ site ပေါ်တွင်အမြဲစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယာဉ်မောင်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း, ဒါသူတို့ပဲ, ငါတို့ပဲမထိုက်မတန်အသုံးပြုတဲ့မော်ဒယ်တစ်ဦးဗားရှင်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်အောက်ပါအတိုင်းထွက်ယူသွားတတ်၏:
တရားဝင် HP ကထောက်ခံမှုစာမျက်နှာကိုသွားပါ
သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်တရားဝင် HP ကအကူအညီစာမျက်နှာကိုသွားပါ။
pop-up menu ကို Expand "ပံ့ပိုးမှု".
တစ်ဦးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ "Software များနှင့်ယာဉ်မောင်း".
ဤသည်ကို download လုပ်ပါရန်ယာဉ်မောင်းလိုအပ်ပေလိမ့်မည်သည့်ရှာဖွေရေးလိုင်းကိရိယာများ၏မော်ဒယ်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာသစ်တစ်ခု tab ကို, ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ site ကိုအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဟာ operating system ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားဆုံးဖြတ်သည်, သို့သော်, ဒါကြောင့်သေချာပေါက်၎င်း၏စစ်မှန်သောညွှန်ပြမထားဘူး။ ကျနော်တို့ဒီလို Windows XP ကိုအဖြစ်, သေချာ OS ကို၏မှန်ကန်သောဗားရှင်းကြောင်းစေရန်အကြံပြုလျက်, ခုန်ပြီးနောက်ဖိုင်တွေတွေ့ပါရန်။
အကျယ်ချဲ့ "ယာဉ်မောင်း-installation ကို kit", ခလုတ်ကိုရှာပါ "Upload လုပ်ပါ" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်မှသာ installer ကို run ကြောင့်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ installation ကိုမပြုမီ, ကြှနျုပျတို့သညျဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်မပါဘဲမှားယှငျးသှားနိုငျသောကွောငျ့, သင့် PC ကိုမှပရင်တာကိုချိတ်ဆက်ကြောင့် run ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
Method ကို 2: drivers တွေကို install လုပ်ဖို့အစီအစဉ်
ယာဉ်မောင်း၏ installation များအတွက် software ကိုအပါအဝင်ဆော့ဖ်ဝဲ၏လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြန့်ဝေနေတဲ့အမျိုးမျိုး၏အခုဆိုရင်အများကြီး။ နီးပါးတိုင်းကိုယ်စားလှယ်အတူတူ algorithm ကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်, သူတို့အချို့အပိုဆောင်း features တွေသာကွာခြား။ အောက်ကလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ဆောင်းပါး၌သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များများ၏စာရင်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုအထဲက Check နှင့် HP က LaserJet 1018 ပရင်တာပေါ်တွင်ဆော့ဖျဝဲထားရန်အများဆုံးအဆင်ပြေကောက်။
A ကောင်းဆုံးရှေးခယျြမှု DriverPack Solution အပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုလျင်မြန်စွာအင်တာနက်ပေါ်ရှိဖိုင်များကိုကိုက်ညီဘို့သင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ရှာဖွေမှုများကိုစိစစ်သည်, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအများကြီးအာကာသကိုတက်ယူမထားဘူး။ အလားတူနည်းလမ်းအတွက် drivers တွေကို install လုပ်ဘို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားပစ္စည်းတှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။
တစ်ဦးကို PC ဆက်စပ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်အရံပစ္စည်းကိရိယာများသာမက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးအမှတ်အသားနဲ့ချိတ်ဆက်တစ်ခုချင်းစီ။ နေ့စဉ်အသုံးပြုသူ၏ဤထူးခြားသောအရေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာကိုရှာဖွေသူတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နှင့် operating system ကိုအပေါ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသော link ကိုပေါ်မှာငါတို့ကအခြားဆောင်းပါးထဲမှာဖတ်ပါ။
Method ကို 4: နျ Standard Windows ကိုနည်းလမ်းများ
အဆိုပါ OS ကိုသငျသညျသစ်ကိုပစ္စည်းတွေအတွက် plug ခွင့်ပြုမယ့်စံ utility ကိုလည်းမရှိ windose ။ သူမသည်ကြောင့်မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းကိုသက်ရောက်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါဟာစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့ပရင်တာ၏အောက်ပါကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့အသုံးပြုသူလိုအပ်ပါတယ်:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Start" နှင့်ကိုသွား "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်".
ခလုတ်ကိုကျော်သင့်ရဲ့ mouse ကိုပျံဝဲ "ပရင်တာတက်ချိန်ညှိခြင်း" ထိုသို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပွိုင့်ဖို့ "ဒေသခံတစ်ဦးပရင်တာ Add".
ဒါဟာခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင့်ကွန်ပျူတာများအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲ port ကိုရွေးချယ်ဖို့သာဖြစ်နေဆဲပင်။
device ကိုစာရင်းထဲမှာပေါ်လာပါဘူး, သို့မဟုတ်လုံးဝမသင့်လျော်သောပရင်တာလည်းမရှိ, အ button ကို click ပါလျှင် ဆက်လက်. ဖိုင်တွေရှာဖွေစတင် "ဒီကို Windows Update ကို".
စာရင်းထဲမှာလုပ်ကို select, မော်ဒယ်နှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပါ။
ယနေ့ကြှနျုပျတို့လတ်ဆတ်တဲ့ဒရိုင်ဘာရှာဖွေရေးလေးနည်းလမ်းများဆွေးနွေးသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ပရင်တာ HP က LaserJet 1018. မှ download, ဤလုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်, ကဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ရှိသမျှကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်များနှင့်ပရင်တာစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါသည်, အချို့သောအချိန်လေးအတွင်းလက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုအတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်။